Ntụnye nkwalite nkuzi - LinuxCapable
Tụnye nkwalite nkuzi
Ụdị a dị na-atụ aro nkuzi ọ bụla na webụsaịtị a nke ị kwenyere na ọ dị mkpa imelite. Nke a nwere ike ịbụ maka mkpoputa, eserese, ma ọ bụ ụdị mana nke kachasị mkpa, gbasara isiokwu nkuzi n'onwe ya. Ka enyekwuru ozi, ka mma na ngwa ngwa nkuzi nwere ike imelite na aro gị.
Biko cheta na a na-eme nkuzi niile n'efu na Linuxcapable.com. Arịrịọ ọ bụla ga-abụ ihe kacha mkpa ma ọ bụrụ na ntụnye mmelite ahụ bara uru; otu o sila dị, a gaghị enye nkwa, etas, wdg. Biko kwanyere ihe a ugwu.
Daalụ maka iwepụta oge iji dejupụta fọm a. Ozi niile na nzaghachi bara uru.
[wpforms id = ”14103 ″]